तीन दिन पार्टीका लागि, ४ दिन रोटीका लागि : प्रवक्ता शर्मा — Himali Sanchar
काठमाडौं, २ असार : विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता भएयता पुरातन ढर्रामा चलिरहेको पार्टीको प्रचार शैली निकै फेरिएको छ । कुनै पनि विषयमा तत्काल धारणा बनाउन सक्ने तथा स्पष्ट र तार्किक ढंगले बोल्न सक्ने क्षमता भएकाले शर्मा प्रवक्ताको भूमिकामा खुबै जमेका छन् । तथापि कतिपयले चाहिँ झिनामसिना कुराहरुमा पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै हिँड्ने र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियताका लागि सस्ता कुराहरु गरेर शर्माले आफूलाई हलुंगो बनाएको टिप्पणी पनि गर्छन् । जे भए पनि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ‘पोष्टर ब्वाई’ झैं बनेका छन् । उनलाई पार्टीभित्र ‘सानो वीपी’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मिडियासँग खासै नबोल्ने र बोलिहाले पनि प्रष्ट नबुझिने भएकाले मिडियाकर्मी शर्माकौ पछि लाग्न बाध्य छन् । त्यसो त प्रवक्ता नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि पनि विश्वप्रकाश चर्चित नै थिए । कलात्मक भाषणशैलीका कारणले उनका प्रशंसक पार्टीभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि छन् । यद्यपि, संसदीय चुनावमा भने उनले झापामा लगातार दुईपटक पराजय व्यहोरे । चुनाव जित्न नसकेकाले अहिलेसम्म उनले सांसद वा मन्त्री पदको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् ।
यिनै युवा नेता शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनलाइनखबरले उनीसँग व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विषयवस्तु खोतल्यो।
मैले सजिलो ठानेर यो जिम्मेवारी लिएको थिइनँ । अप्ठेरो विषयको पनि अभ्यास गर्ने र आफ्नो क्षमतावृद्धि गर्दै पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउने भन्ने कोणबाट नै हेरेको हुँ । मैले जिम्मेवारी लिँदा कांग्रेस प्रतिकुल अवस्थामा थियो । प्रतिकुलताको बीचबाटै अनुकुलता सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको छु ।
कांग्रेसको सौन्दर्य के छ भने यहाँ फरक मतलाई पनि अवहेलना र तिरस्कार गरिँदैन । सबैका विचारलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्ने परम्परा भएकाले प्रवक्तालाई अलिकति सजिलो पनि छ । त्यसको अर्थ म सधैं पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिएर बोल्छु भन्ने होइन । त्यस्तो अपवादमा हुन्छ ।
ती दुवै ट्विट हतारिएर नभई सोची सम्झी गरेको हुँ । एक घन्टा होइन, २०-३० मिनेटको फरकमा होला । त्यस दिन म झापाबाट साथीको गाडीमा बाग्लुङतर्फ जाँदै थिएँ । पथलैया पुग्दा अनलाइनमा सिके राउतको समाचार पढेँ । सरसर्ती ११ बुदेँ सम्झौता पत्र पढ्दा बुँदा १ र बुँदा २ महत्वपूर्ण थिए ।
पहिलो बुँदालाई तपाईं विरोध गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, किनभने त्यसमा पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर नेपालको संविधान र सार्वभौमिकता स्वीकार गर्ने कुरा थियो । दोस्रो बुँदा तपाईं समर्थन गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, किनकि त्यसमा ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ बाट समस्या हल गर्ने भनिएको थियो ।
अधिकांश विषयमा पार्टीको स्पिरिटको जगमा उभिएर धारणा बनाउने र सार्वजनिक गर्ने काम हुन्छ । कुनै विषय चर्चामा आउँदै गर्दा पार्टीको कार्यसमिति वैठक बसेर वा सभापतिज्यूलाई सोधेर मात्र प्रतिक्रिया दिने कुरा व्यवहारिक र प्रभावकारी हुँदैन ।
प्रवक्ताले कहिलेकाहीँ तुरुन्तै धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । आखिर विचार जनेरेट गर्ने पनि त प्रवक्ताको जिम्मेवारी हो । त्यसमा मैले हेर्ने भनेको पार्टीको विचारको जग र संविधानको स्पिरिट हो । समग्रतामा आधाभन्दा बढी आफैंले सोचविचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
विप्लवको प्रकरणमा त्यस्तो भएको हो । तर, सभापति र प्रवक्ताले के बोल्नुभयो भन्ने एउटा विषय हुँदै गर्दा महत्वपूर्णचाहिँ अन्ततः कांग्रेसले के बोल्यो भन्ने हो । मैले जे बोलेँ, त्यो विपरीतमा त पार्टी गएन । सभापतिले सरल तरिकाले भनिदिनुभएको थियो, विप्लवले यत्रो हिंसा गरिरहेको छ, उदयपुरमा मिरा कटुवालको खुट्टा काट्नुपर्‍यो, उदयपुरका नारायण कार्कीको खुट्टा काट्नुपरो । त्यसैले यसलाई प्रतिवन्ध गरौं सरकारले भन्छ भने विरोधका लागि विरोध किन गर्ने ? उहाँलाई लाग्यो होला । त्यसैले तत्कालिकरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो । पछि सच्याउनुभयो ।
विचारमा फरक मत नै कांग्रेसको सौन्दर्य हो । सभापति र प्रवक्ताको निरन्तर दुई धारणा आयो भने अनुशासनको प्रश्न उठ्ला । दुई तीन दिनपछि त पार्टीको स्पष्ट धारणा आइहाल्यो । सभापतिले बिराटनगरमा त्यो भन्नुभयो, पछि पाल्पामा गएर निषेध गर्नु हुँदैन र वार्ताले मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो। जम्मा दुई दिन जति मात्रै अन्योल भएको हो ।
हामी सन्दर्भअनुसार आवश्यक हुने विषयमा प्रतिक्रिया दिन्छौं । म्याथको टिचरले म्याथै पढाउँछ नि । प्रवक्ताले पार्टीको नीति सिद्धान्तको वकालत गर्नुका साथै विपक्षीबाट प्रहार हुँदा बचाउ पनि गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसको प्रवक्ता हुनुको नाताले त्यो मेरो जिम्मेवारी हो । कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नीति–सिद्धान्त र दस्तावेजलाई चिरेर बोल्नुपर्ने होला, कहिले सरकारको गलत क्रियाकलापमाथि बोल्नुपर्ने हुन्छ होला, कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन पनि गर्नुपर्छ होला।
कमरेड केपी ओलीको हकमा प्रवृत्ति हो, भने सभापतिज्यूको हकमा घटना हो । सभापतिजयूले त्यस्तै खालको व्यवहार गरेको अर्को कुनै घटना भए देखाउनुस् ।
त्यो उहाँको शैली हो । हरेक नेताको शैली र स्वाभाव आफ्नो–आफ्नो हुन्छ । गाली गरेको भनिरहँदा उहाँले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसमा जाउँ न । उहाँले कुनै अपाच्य वा अपशब्द बोल्नुभएको थियो त ?
बीबीसीको साझा सवालमा पनि उहाँले प्रश्न सोध्नेलाई ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्नुभएको थियो, कुनै अपशब्द त प्रयोग गर्नुभएको थिएन । त्यसो भन्दै गर्दा म उहाँको शैली ठीक हो भनिरहेको छैन । सकभर झोंक नदेखाउनु राम्रो हो ।
सडकमा नआए पनि संसद त बारम्बार बन्द गराउनुभएको छ नि ?
होला, नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले फरक–फरक विचार अभिव्यक्त गर्‍यौं होला । उहाँले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्नुभयो होला । मैले नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनले मात्र गर्नुपर्छ भनेँ होला । यसैलाई लिएर एकअर्कामाथि खनिएको भनेर समाचार लेख्नु त अतिरञ्जना भयो नि । गगन मेरा समकालिन हुन् । हामी दुवैमा एकअर्काप्रति कुनै तुष छैन ।
उमेरले ५-७ वर्षको फरक हो । हामीले सँगै विद्यार्थी राजनीति गर्‍यौं । म नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा उनी मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष थिए । त्यतिबेलाको कार्यसमितिमा ५ उपाध्यक्षमध्ये गगन सबैभन्दा अगाडि गए । अरु चारजना पनि होनाहार थिए । उनीहरु सबैमा म गर्व गर्छु । गगनलाई पहिल्यैदेखि मैले उदाउँदो प्रतिभाका रुपमा हेरेँ । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेविसंघको सभापतिमा उम्मेदवार बनाउँदा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक म पनि थिएँ ।
त्यसो भए के मलाई ओभरटेक नगर्ने भनेर उहाँले जानीजानी चुनाव हार्नुपर्थ्यो ? झापाबाट मैले चुनाव हारेको समाचार आइरहँदा उहाँले पनि काठमाडौंमा जित्दाजित्दै हार स्वीकार गर्नुपर्थ्यो ? चुनावअघि मैले गगनका लागि मत मागेको छु । गगनले मेरा लागि मत मागेका छन् । झापामा मेरो सचिवालय र काठमाडौंमा मेरो सचिवालयले एकै समयमा भिडियो सन्देश जारी गरेर एक–अर्काका लागि भोट मागेका हौं कि होइनौं ?
म आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफैंलाई मान्छु । म एक वर्ष अगाडि कहाँ थिएँ र अहिले कहाँ छु भनेर दाँज्छु । अरुसित दाँजेर समय खेर फाल्दिनँ । गगन भोलि कांग्रेसलाई र देशलाई नै नेतृत्व गर्न सक्ने नेता हुन् । हामी दुवैले एक–अर्कालाई स्वीकारेर नै अगाडि बढिरहेका छौं । उनको प्रगतिमा मलाई गर्व छ । यतिसम्म कि मलाई भोलि यदि म रहिँन भने पनि मेरो पुस्ताका थुप्रै योग्य साथी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर ढुक्क लाग्छ ।
मृत्यु कसले देखेको छ र ? कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ, अबको १५ वर्षसम्म विश्वप्रकाश बाँचिरहन्छ भनेर ? रवीन्द्र अधिकारी मेरा परम भित्र थिए । कम्युनिष्ट पार्टीमा मेरो तँ, तिमी चल्ने केही घनिष्ठ साथी मध्ये थिए उनी । यति चाँडै जालान् भन्ने सोचिएको थियो र ? यदि कुनै घटना भएर म पनि अकश्मात गएँ भने मलाई यो कुरामा ढुक्क हुनेछ कि मेरो पुस्ताका भरोसायोग्य साथीहरु बढिरहेका छन् है ।
कतिपय कुराहरुलाई आध्यात्मिक कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ । जबसम्म हामी रहन्छौं, समाजको रुपान्तरणका लागि क्रियाशील हुन्छौं । मैले बेलाबेला भन्छु– मान्छे जिउँदो रहँदासम्म मात्रै समाजको सेवा गर्ने हो । मरेपछि सकियो । यदि भेडा भएको भए मरेपछि स्वीटर बनेर अरुलाई न्यानो दिन सक्थ्यो ।
भैंसी भएको भए कसैको जुत्ता बनेर सेवा दिन सक्थ्यो । बाख्री भएको भए मादलको छाला बनेर घिन्ताङ घिन्ताङ बज्न सक्थ्यो । हामी मानिसको शरीर त मरेपछि खरानी हुने हो । हामीले छोडेको कीर्ति मात्रै बाँकी रहन्छन् ।
मलाई जिल्लामा जाँदा धेरै साथीहरुले यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तपाईं महामन्त्रीको उम्मेदवार हो कि सभापतिको कि के हो भन्नुहुन्छ ? म एउटै वाक्यमा जवाफ दिन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको प्रवक्ताबाटै मात्रै विदा हुने गरी चाहिँ राजनीतिमा आएको होइन ।
मैले अघि उत्तर दिइसकें । समय भएको छैन बोल्ने । देशभरका साथीभाइको अपेक्षा के छ बुझ्नुपर्‍यो। सभापति वा महामन्त्रीको दौड सुरु नै भएको छैन। विवाहको मिति टुंगो नभई, कन्या फेला नपरिकन दौरा–सुरुवाल सिलाउन कुद्नु ठीक हुँदैन । अहिले मैले आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गरेँ र अन्य उम्मेदवारहरुमाथि टिप्पणी गरेँ भने तपाईंको सबै अन्तरवार्ताको केन्द्रविन्दु यही बन्न पुग्छ र अरु सबै कुरा गौण बनिदिन्छन् । यो भनाइलाई पनि जस्ताको तस्तै राखिदिनुहोला ।
म त नेतृत्व वा पदाधिकारीमा युवाको अधीकता हुने भन्दा पनि सिंगो कांग्रेसलाई तन्नेरी बनाउने सोच राख्छु। व्यक्ति युवा हुनेभन्दा सोच युवा हुनुपर्छ ।
पार्टीको प्रवक्ता कुनै गुटको हुँदैन। प्रवक्ताले त पार्टीभित्रका सबै मतहरुलाई समेटेर सबैको साझा बन्न सक्नुपर्छ । म त्यही प्रयत्न गरिरहेको छु । पार्टीभित्रका फरक समुहहरु भनेका फरक बोटमा फुलेका फूलहरु हुन् । हरेक फूलहरुसँग बेग्लै बास्ना हुन्छ । यी फूलहरुलाई गाँस्नका लागि जुन धागो प्रयोग हुन्छ, त्यसमा त बास्ना हुँदैन । प्रवक्ता भनेको पनि धागोजस्तै हो, यसमा कुनै गुटको बास्ना हुँदैन ।
देउवाले तपाईंलाई प्रवक्ताको भूमिकामा कसरी विश्वास गर्नुभयो, जबकि उहाँ पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीप्रति त्यति उदार मानिनुहुन्न ?
म उहाँको प्रतिपक्षी थिइनँ । उहाँलाई सभापति बनाउन मत हालेको हुँ । देउवाले प्रवक्ता बनाएपछि अचानक गुट बदलेको होइन । प्रवक्ता बन्नुअघि विरोध र प्रवक्ता बनेपछि जयजयकार गरेर हिँडेको पनि छैन। मैले देउवालाई सभापति बनाउन लाग्दै गर्दा उहाँले ‘भोलि भाइले प्रवक्ता भएर काम गर्नुपर्छ’ भन्नु भएको थियो। बरु दुई वर्ष किन ढिला गर्नुभयो भन्ने पो मेरो गुनासो थियो त। निर्वाचन अगाडि नै म प्रवक्ता हुनुपर्थ्यो ।
चुनाव अगाडि त प्रवक्तामा गगन थापाको नाम चर्चामा थियो। उहाँको नाममा चिठी पनि बनिसकेको तर पछि कार्यान्वयन नभएको कुरा कति सत्य हो ?
त्यो मैले पनि सुनेको हुँ । एकिन कुरा थाहा भएन। प्रवक्ता कसलाई बनाउने भन्ने सभापतिको कुरा हो।
वीपीले ४१ वर्ष अगाडिको पुस १६ गते मेलमिलापको नीति ल्याउनुभयो । त्यही स्पिरिटमा उभिएर हामीले पुस १६ गते नै हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौं । सात जनाको विज्ञप्तिमा के थियो हेरौं । “विगतका अप्रिय कुराहरु बिर्सिएर नविन ढंगले अगाडि बढौं । हामी हारेका छौं, तर थाकेका छैनौं । ढलेका हौंला, तर मरेका छैनौं । हामी छौं, नविन ढंगले आउँछौं । म बदलिन्छु, हामी बदलिन्छौं, हाम्रो देश बदल्छौं।” विज्ञप्तिको सार यही थियो । यही गुटलाई सदासर्वदा कायम राखेर सबै चिजमा भाग खोज्ने खालको अवधारणा थिएन । आज जागरण अभियानसम्म आइरहँदा त्यतिबेला हामीले अघि सारेको नविन सोचको रिफ्लेक्सन यसमा केही न केही छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंको अन्तरवार्ता लिन आउनुअघि इन्टरनेटमा तपाईंको प्रोफाइल चेक गरेको थिएँ । के भेटेँ भने तपाईंले ०४३ सालयता पार्टीभित्र र बाहिर ५ वटा चुनाव हारिसक्नुभएको रहेछ । ०४३ सालमा मेची क्याम्पसको स्ववियू सदस्य हार्नुभयो । ०४५ सालमा सहसचिवमा हार्नुभयो। झापाको कांग्रेस सभापतिमा हार्नुभयो। पछिल्ला दुईवटा संसदीय चुनावमा हार्नुभयो । लगातारको पराजयलाई विश्लेषण गर्दा तपाईं आफूलाई अभागी मान्नुहुन्छ कि अलोकप्रिय ?
मैले अहिलेसम्म ६/७ वटा चुनाव लडेकोमा केही हारेँ होला । तर, सबै हारेको छैन । नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष जितेकै हुँ । पछिल्लो दुई संसदीय चुनावमा लगातार पराजय व्यहोरेको हुँ । तर, म आफूलाई अभागी भन्न चाहन्न । चुनावमा धेरै फ्याक्टरहरुले काम गर्छन् । मेरो क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो थियो, तर एमाले र माओवादी मिलेपछि हामी पछि धकेलियौं । दोस्रो र तेस्रो मिलेपछि पहिलोलाई गाह्रो त भइहाल्छ ।
त्यसरी भन्दा पनि मैले पार्टीभित्र ‘आवश्यक परे त्यहाँ लड्न तयार छु’ भनेको हो । पार्टीले निर्णय गरेको भए लड्ने थिएँ । तर, मेरो पहिलो प्राथमिकता केपी ओलीको क्षेत्र थिएन । आफ्नो क्षेत्र, जहाँ म जन्मेको, हुर्केको, पढेको छु, जहाँको नदिमा आफ्ना पितामातालाई जलाएको छु, त्यही मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।
भविश्यमा कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदमा पुगेँ भने पनि मरेपछि मलाई काठमाडौंको आर्यघाटमा होइन, यहीँको माटोमा विलीन होउँ भन्ने चाहन्छु । त्यसैले चुनाव लड्ने सवालमा पनि झापा १ नै मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो ।
आफ्नो क्षेत्र छाडेर जानुपर्‍यो भने अन्त किन जाने ? त्यतिबेलाको लोकप्रिय नेता । पूर्वप्रधानमन्त्री । जनताले उहाँबाट आशा निकै राखेका थिए । आशा राखेको नेतालाई हराउनैपर्छ भन्ने पनि मेरो मनमा थिएनँ । उहाँलाई जित्छु भन्ने नै थिएनँ । म आफ्नै क्षेत्रमा त हारेँ भने उहाँको क्षेत्रमा के जित्थेँ होला ? तर, पार्टीले लड् भन्यो भने मैले जितको खोजी मात्रै गर्नु हुँदैनथ्यो । उहाँसँग हारे पनि मेरो विजय नै हुन्थ्यो । जिते त झन् दिग्विजय हुन्थ्यो ।
विल्कुलै होइन । त्यस्तो खालको लोभबाट राजनीतिको दिर्घजिवन हुन्छ भन्ने सोच्दिनँ । मैले त झापा १ मा हार्दैगर्दा सबैले देख्दादेख्दै बगैंचाबाट फूल टिप्न लगाएर, सबैले देख्दादेख्दै माला उनेर, सबैको अगाडि कम्युनिष्ट मित्र राम कार्कीको गलामा माला पहिर्‍याइदिएर बधाई दिएको हुँ नि ।
त्यतिबेला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘मैले लगाइदिएको फूलको माला ओइलिएर झरे पनि जनताको विश्वासको माला ओइलिएर नझरोस्। मैले सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यसो गरेको थिइनँ ।
सत्तारुढ नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लैजादा पनि त आलोचना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट सिफारिस गर्दा तपाईंले नै कटाक्ष गर्नुभएको थियो । यदि कुनै कार्यक्रम नलगेको भए प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा समेत केही गरेन भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो होला होइन ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा अलि बढी विकास लैजाँदै गर्दा माफ गरौंला । तर, यसो सोचौं न । नेपालमा संसारको सबैभन्दा अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउनु त राम्रो हो । तर, त्यो मूर्ति कहाँ बनाउने ? कि मेचीको किनारमा कि महाकालीको किनारमा हुनुपर्ने हो । वा लुम्बिनीमा हुनुपर्ने ? तर उहाँलाई दमकै बनाउनुपर्‍यो । यसमा पनि मेरो विरोध छैन ।
पक्कै पनि प्रयास गरेको छु । मेरा केही व्यवसायहरु छन् । ट्राभल एजेन्सी छ । बिर्तामोडमा कलेज छ । निर्माणाधीन इलामको सिद्धी हाइड्रोमा सेयर छ । यस्तो कुरामा गाँसिने कर्म गरिनँ भने भविश्यमा अख्तियारको अघिल्तिर अनुहार रुमालले छोपेर/बाँधर उभिनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ नि । छोराछोरीले कमाउने बेला पनि भएको छैन ।
छोरी कक्षा ९ मा र छोरा युकेजीमा पढ्दैछन् ।
परिवारको पूर्ण समर्थन रह्यो । पञ्चायतकालमा एक दर्जनपटक हिरासतमा बसेँ । हरेकचोटि मातापिताको आशिर्वाद पाएँ । पिताजी पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । म जन्मेको केही समयपछि जेल पर्नुभएको थियो । मेरो जिन्दगीको पहिलो दशैंमा बुवाले जेलमै टीका लगाइदिनुभएको थियो रे । यो ०२८ सालको कुरा हो।
भाषण त म अहिलेभन्दा पनि ०४३/०४४ सालतिर मेची क्याम्पसको सभापति हुँदा राम्रो गर्थेँ जस्तो लाग्छ । अहिले सरकारको प्रतिपक्षी छौं । तर, त्यतिबेला सिंगै व्यवस्थाको प्रतिपक्षी थियौं । मनभित्र व्यग्रता हुन्थ्यो, विद्रोह हुन्थ्यो । भाषण गर्दा अन्तरआत्माबाट गरिन्थ्यो । बोल्नुको पनि मज्जा थियो ।
सुनेको मात्र होइन, ०४९ सालमा मीनभवन क्याम्पसमा भएको एउटा कार्यक्रममा उहाँ आउनुभएको थियो। त्यही मञ्चमा म पनि नेविसंघको केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा वक्ता थिएँ। पछि उहाँका भाषणहरु मैले युट्युवमा पनि हेरेको छु ।
पहिलोचोटि केपी ओलीको विषयमा राम्रो टिप्पणी गर्नुभयो ?
कमरेड केपी ओलीप्रति सहानुभूति राखेर विगतमा लेखेको पनि छु । तत्कालीन एमालेभित्रको विवादलाई लिएर ‘संस्कारको समाधि’ भन्ने लेख लेखेको थिएँ । त्यतिबेला बिरामी नेताले पार्टीको नेतृत्व दिनु हुँदैन भनेर माधव नेपाल गुटले केपी ओलीलाई खेदिरहेको अवस्था थियो ।
मैले लेखेँ कि राजनीतिमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा मेडिकल रिपोर्टले होइन, पोलिटिकल रिपोर्टले तय गर्छ । वीपी कोइरालालाई ३२ वर्षमा क्यान्सर भयो । के अरु नेताले उहाँलाई ‘हे क्यान्सर रोगी ब्राम्हण, तिमीले हाम्रो नेतृत्व गर्न पाउँदैनौं’ भनेर भने ?
स्वस्थ शरीर पनि चाहिन्छ । तर, एउटाले हाछ्यूँ गर्‍यो त्यसलाई हटाउँ भन्नु ठीक होइन । केपी ओली किड्नीको समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि माधव नेपालका पनि धेरैथरी रोग बाहिर आए । मैले ‘संस्कारको समाधी’ लेखमार्फत भनेको थिएँ, माधव नेपाललाई बनाउनुस् वा केपी ओलीलाई बनाउनुस् दुवै जना योग्य हुनुहुन्छ । दुवैको राजनीतिक रिपोर्ट तुलना गर्नुस् । एउटा रोग बढी भए अयोग्य र एउटा रोग कम भए योग्य हुने हो र ?
राजनीति आम सरोकारको विषय हो । एउटा राजनीतिक दल राम्रो भयो भने अर्को दललाई बेफाइदा हुने होइन । समग्रमा राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ । हामीले जागरण अभियानमा ब्याच नलगाउने, आसन ग्रहण कम गराउने कुराहरु लागू गर्दा अन्य पार्टीहरुले पनि स्वागत गर्नुभयो । हामीले लेख्दै के लेखेका छौं भने केजीमा तौलिने माला नलगाउने ।
नेतालाई केवल एउटा फूलको थुँगाले स्वागत गर्न सकिन्छ । सारा बगैंचा फाँडेर माला लगाइदिनु आवश्यक छैन । यो समग्र राजनीतिक चरित्र र व्यवहारलाई सच्याउने सोच हो । हामी राम्रो हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीलाई र कम्युनिष्ट राम्रो भए हामीलाई पनि फाइदा छ ।
भन्नाले मैले नेपालीमा लेखेर अरु अनुवाद गराइएको हो । लिम्बु, राई, मैथली, भोजपुरी, नेवारी, थारु, तामाङ लगायत भाषामा अनुवाद गरेर गाइएको छ। संगीत चाहिँ मैले नै भरेको हुँ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु । एकजना हात काटिएकी महिला छिन् देवीमाया, जसको काखमा सात दिनको र अर्को अढाई बर्षको बच्चा थिए । सात दिनको सुत्केरी भएका बेला उनकका श्रीमानको मृत्यु भयो । सासू आमा पनि आँखा नदेख्ने । छोरीको न्वारान गर्ने बेलामा कोरामा बस्नुपर्‍यो । उनको घर छैन । आठ महिनादेखि कोठाको भाडा तिरेको छैन । अब म उनलाई अरुले जस्तै एक–दुई बोरा चामल दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको त मान्न सक्दिनँ । त्यसैले मैले उनलाई एक टुक्रा जग्गा दिएँ । धेरै जना मिलेर त्यसमा एउटा घर बनायौं ।
कुनै राजनीतिक विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएको छ भने धेरै वास्ता गर्दिनँ । तर, निश्वार्थ ढंगले गरिएको सामाजिक काममा पनि यसरी गाली खानुपर्‍यो भने चित्त अवश्य दुख्छ ।
त्यस्तो विल्कुल छैन । आक्रमण त कांग्रेसमाथि पनि उहाँहरुले गर्नुभएको छ । चुनावका बेलामा कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि बम पड्काइएका छन् । तर, कुनै घटनाका कारण प्रतिवन्ध लगाउने हो भने त सत्तारुढ नेकपालाई पहिले प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ । किनकि, बितेको एक वर्षमा पटकपटक कांग्रेस कार्यकर्तामाथि नेकपा कार्यकर्ताबाट आक्रमण भएको छ ।
रोल्पामा तरुण दलका नगर सभापति पूर्वमाओवादीबाट मारिए । सर्लाहीमा रामविलास महतो पनि विप्लवबाट नभएर पूर्वएमालेबाट मारिएका हुन् । त्यसो भए के नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाइदिने त ?
मिलाएर लैजानुपर्‍यो । कसैलाई निषेध गरेर हुँदैन । यदि निषेध नै समाधान हुन्थ्यो भने सरकारले प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि मान्छे मारिनु नपर्ने । त्यस्तो स्थिति त छैन । हामी अभ्यासबाटै निषेध गलत हो भनिरहेका छौं । हामीले तत्कालीन माओवादीलाई बल प्रयोग गरेर सिध्याउन संकटकाल लगायौं । तर, सिद्धिए त ? झन् समस्या चर्कियो नि । अन्ततः वार्ताबाटै समस्या हल भयो कि भएन ?
कांग्रेसले प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवसहितको पहाडजस्तो माओवादीलाई विश्वासमा लियो । आज कमरेड केपी ओलीले निषेध मात्रै गरेर हामी समाधानमा पुग्न सक्छौं भन्दै गर्दा के त्यसले समाधान दिएको छ त ? यसबीचमा वार्ता गरेको भए बरु समाधानउन्मुख हुन्थ्यौं कि ? अनुभवबाट सिक्नुपर्‍यो ।
प्रतिवन्ध त कानून अनुसार पनि छैन । जो संविधानको परिधिभित्र छ, उसलाई प्रतिवन्ध लाग्छ । जसले संविधानै मानेको छैन, उसलाई प्रतिवन्धले के फरक पार्छ ? बरु यसले राज्यको प्रहरीलाई असर गरेको छ । उनीहरुको मनोबल घटाइदिएको छ । अस्ति ओखलढुंगामा विप्लवले आक्रमण गर्दैछ भन्ने सूचना आउँदै गर्दा प्रहरीहरु सतर्क भएर बसेको चौकी छोडेर भागे ? यस्तो त्रस्त मनोविज्ञान प्रहरीमा सिर्जना गरिएको छ ।